Isa TP-LINK TL-WN725N (v2) mini Wifi adapter muArch Linux uye Ubuntu 12.04+ | Kubva kuLinux
Isa TP-LINK TL-WN725N (v2) mini Wifi adapter muArch Linux uye Ubuntu 12.04+
Munguva pfupi yapfuura, zvidiki zvidiki zveUSB-Wi-Fi yekubatanidza adapta auya pamusika, hapana yakakura kupfuura yeBluetooth dongle kana diki yemari, yakangwara uye inoshanda kushandisa mumalaptop isina kadhi yeWi-Fi (kana iyo ine yatokuvara) kana kunyangwe pakomputa dzedesktop. Nekuda kwehukuru hwavo hudiki, havadzime zvakapetwa zvigadzirwa zveUSB uye mutengo wavo (wakakomberedza 12-15 USD) unovaita dzimwe nzira dzakanakisa dzekupa wi-fi yekubatanidza kune yedu michina.
Iyo modhi inomira kunze kwesimba rayo uye mutengo ndiyo TL-WN725N(v2) kubva TP-LINK, iyo yakatanga kuoneka mune yayo yekutanga vhezheni (v1) neRealtek Hardware RTL8188 cus uye mutyairi akagadzirwa uyo akashanda chaizvo paRaspbian distro (yakavakirwa paDebian) yakagadzirirwa Raspberry mini michina; asi pasina yambiro vakachinjisa Hardware kuita RTL8188 EU yechipiri vhezheni (v2) uye Realtek yakagadzira mutyairi wechizvarwa cheLinux asi yakagadzirisirwa kernel vhezheni 3.3 zvichienda mberi, ichisiya Raspbian neCrunchbang, pakati pemamwe madhiri.
Neraki vhezheni 2 yeTL-WN725N ndiyo yakagovaniswa zvakanyanya muLatin America, ID yayo nhamba ndeiyi: 0bda: 8179 uye nharaunda yekuvandudza yakabudirira kugadzirisa mutyairi kune akakurumbira kugoverwa kweLinux, uye panguva ino tichaiisa pane Arch Linux uye Ubuntu 12.04 (11.10 zvichienda mberi):
Vhura terminal uye gadziridza iyo system ne: sudo pacman -Syu
Unganidza iyo TL-WN725N chishandiso kune usb port.
Mune terminal yekumisikidza kuburikidza neAUR iyo package ine mutyairi: yaourt -S dkms-8188eu
Usagadzirise chero mafaera ekumisikidza uye rega Yaourt dhawunirodhi, nyora, zip uye isa mutyairi uye uigadzirise.
Kana wapedza, iwe uchaona kuti iyo wi-fi adapter inovhenekera ine diki bhuruu yakatungamirwa, tangazve iyo michina uye ndizvozvo.
Zvichienderana nedesktop yako nharaunda, iyo yekubatanidza netiweki pane taskbar inokuudza iwe kuti isina waya netiweki anowanikwa.
Vhura terminal uye gadziridza / gadza GIT: sudo apt-tora kuisa - gadzira kuvaka-kwakakosha git
Dhawunirodha mutyairi kubva kuGIT: git clone git: //github.com/liwei/rpi-rtl8188eu.git
Enda kufolda kwayakatorwa pasi: cd ~ / rpi-rtl8188eu
Nyora iyo: kuita
Isa iyo: sudo make install
Shandisa ma module. sudo depmod -a
Gadziridza kernel ndangariro: sudo yekuvandudza-initramfs -u
Takura muto mutsva kune kernel: sudo modprobe -v 8188eu
Unganidza iyo wi-fi adapta kune inowanikwa usb port.
Pakupedzisira mune ino kesi, haufanire kutangazve komputa, nekumisa network kubva kuNetwork Maneja nekuimisikidza zvakare, iwe uchaona kuti yebhuruu yakatungamirwa ye mini adapter inotendeuka uye panenge paine wi-fi yekubatanidza.
Yeshoko 1 reiyi adapta (RTL8188 cus-kana iwe wakachiwana kunze uko- kune .deb package (ye kernel vhezheni 3.4 zvichienda mberi) iyo inoisa mutyairi zviri nyore, inoshanda zvinobudirira paUbuntu 13.04 uye Debian 7, tora pano. Mutyairi TP-LINK TL-WN725N (v1 rtl8188cus)
Ndinovimba ruzivo urwu runobatsira kwauri, uye kwaziso kune vese.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Dzidziso / Mabhuku / Matipi » Isa TP-LINK TL-WN725N (v2) mini Wifi adapter muArch Linux uye Ubuntu 12.04+
Ini ndaifunga kuti TP-Link yaizoshandura chipset iyo yanga isingaenderane neLinux, asi tenda kunaka kwanga kusiri.
Ndinoiona ichibatsira kwazvo, ndine vhezheni 1 uye yakandipa matambudziko muCrunchbang 11. Kune avo vanochida mune iyi link unogona kuona kuti ungaiisa sei muKernel 3.2, yakaedzwa muDebian Wheezy. Usafunge se spam 😉 https://manraog.wordpress.com/2013/06/30/solucionar-problemas-con-adaptador-wi-fi-realtek-rtl8188cu-tl-wn725n-v1-ew-7811un-en-linux/
Kutenda nekugovana mhinduro yako kune avo vane vhezheni yekutanga, inobatsira zvikuru.
Zvakanaka, ndine USB wifi kanyanga ine adapta yeimwe yekunze kanyanga uye inondiziva ini ipapo.
uye iri TP-LINK
Ichokwadi. Uyezve, mu Wheezy yekuvandudza 7.1 inofanira kunge yatoziva kuti Wi-Fi kanyanga isina matambudziko, nekuti mutyairi akawedzerwa.
Asi ndichaita sei apt-tora kana chaizvo zvandiri kuedza kuisa kugona kubatana neInternet ??? Dai ndaigona kuita apt-tora isu taipedza xD
Pindura kuna Dérir
Zvinoita pasina kutaura kuti komputa yaifanirwa kuve yakabatana kunetiweki neinternet kuwana kuburikidza neethernet tambo, kana kana zvisingaite kurodha mutyairi pane imwe pc uye kuinyora neruoko pakombuta pasina kubatana. Duh.
Mhoroi, ini handizive kwazvo nezvenyaya iyi, asi ndinofanira kuzviita sei kune Android 4.2.2? Mufaro!
Kana iwe uri kushandisa Android pane mini Raspberry mhando komputa iwe unofanirwa kuumbiridza mutyairi neruoko nekuti Android ine yakavharwa kernel yakagadziridzwa naiye akaiisa, kana iri yepiritsi ungafanira kutarisa nemugadziri kana iyo kernel ichibvumidza kuchinjiswa nemushandisi mukati Kugadziriswa kana kumisikidzwa kwechitatu-bato software. Chero zvazvingaitika, zvingave zvirinani kushandisa imwe yakavhurika inoshanda sisitimu iyo inobvumidza iwe kuisa mutyairi pasina kubhururuka kana kutyora mvumo yeApple yekushandura kernel.
Kunyangwe ndiri munhuwo zvake, ndakazviita kuti zvishande.
Unozvitsanangura mushe zvekuti hazvigone kutadza.
Makorokoto uye endererai.
Iyo yakandishandira ini kune ubuntu 12, asi ye ubuntu 13 iyo inopa kukanganisa mune iyo make.
Mune ino foramu http://peppermintos.net/viewtopic.php?f=8&t=5619 Ivo vanotsanangura maitiro ekuzviitira iyo Ubuntu 13.04. Chaizvoizvo nhanho 2 ne3 shanduko, uchisiya:
2) git dombo git: //github.com/lwfinger/rtl8188eu.git
3) cd ~ / rtl8188eu
Ndatenda nekuisa kwako, sezviri pachena ivo vakaisawo lwfinger vhezheni yemutyairi kuGIT kuti igadzirise kune Canonical kernel inogadziridza yeUbuntu 13.04 (3.8 chimwe chinhu). Muchinyorwa chino ndiyo yei vhezheni asi zvakangofanana.
santiago leon akadaro
Ndotenda zvikuru! Matanho eposvo anga asina kundishandira nekuti adapta yangu vhezheni v3.0, asi nenzira yako yakagadziriswa! Kutenda kune vese!
ANOSHANDA PASI ELEMENTARY OS.
Pindura Santiago Leon
Zvinoshungurudza asi zvakandishandira paUbuntu 12.04 asi kwete paMint 13. Ini ndaifunga zvakafanana nezvakasiyana Wallpaper
Mint ikozvino yawedzera Debian kupfuura Ubuntu, saka hazvishande.
Kugona chose Chekutanga pane zvese nekuda kweruzivo.
NeUbuntu 11.10 iri kushanda inondishandira, asi, hei, ndinodzima komputa ndoibatidza zvakare uye haina kukanda iyo wifi kuburikidza neUSB.
Saka, ndaona zvandakaona, ndinofanira kudzokera kumatanho kubva panongedzo 4, ndiko kuti, kuumbiridza, kumisikidza, kumisikidza iyo kernel, kurodha module, nezvimwe, nezvimwe.
Panofanira kunge paine nzira yekuti igare isingagumi uye mutyairi kuti atakure pamwe chete nevamwe vatyairi apo OS iri kurodha.
Chero mupiro mune izvi?
Ndatenda zvikuru pamberi.
Dambudziko neUbuntu nderekuti yega kernel yekuvandudza iwe unofanirwa kuisa mutyairi zvakare, nekuti inobvisa iyo yapfuura payakange yatove kuiswa. Edza kuiisa pamwe nedhiyo yakabatana kubva pakutanga, uye kana ikaramba ichiita chinhu chimwe chete pese paunotangidza komputa, gadziridza ku12.04 LTS uye hauzove nedambudziko.
Manheru akanaka shamwari, zvichave kuti mumwe munhu anoziva kundibatsira, ini ndinoteedzera nhanho dzese asi kubva nhasi zvandichichinja kuita 12.04LTS hazvishande kwandiri uye kana ndakazviita nevane gumi nematatu, ini ndatoedza uye ndine hapana kukanganisa asi kana zvasvika pakuziva mudziyo unoshanda. Handizive zvandiri kutadza, ndinokutendai pamberi nerubatsiro rwenyu.
Leon Ponce akadaro
Kuita make kunondipa kukanganisa. Ini ndinonamira zvinobuda mune terminal.
cc1: dzimwe yambiro dziri kubatwa semhosho
gadzira : *** [/home/cristian/rpi-rtl8188eu/core/rtw_cmd.o] Kukanganisa 1
gadzira : *** [_module_ / home / cristian / rpi-rtl8188eu] Kukanganisa 2
gadzira : buda dhairekitori "/usr/src/linux-headers-3.8.0-35-generic"
gadzira: *** [ma module] Kukanganisa 2
Ini ndinopindura kuti ndiwedzere.
gadzira ARCH = i386 CROSS_COMPILE = -C /lib/modules/3.8.0-35-generic/build M = / home / cristian / rpi-rtl8188eu modules
gadzira : pinda dhairekitori "/usr/src/linux-headers-3.8.0-35-generic"
CC [M] /home/cristian/rpi-rtl8188eu/core/rtw_cmd.o
Mune faira inosanganisirwa kubva /home/cristian/rpi-rtl8188eu/core/rtw_cmd.c:23:0:
/home/cristian/rpi-rtl8188eu/include/osdep_service.h: Mune 'thread_enter' basa:
/home/cristian/rpi-rtl8188eu/include/osdep_service.h:1397: 2: kukanganisa: kusazivisa chirevo chebasa 'daemonize' [-Werror = chirevo-chirevo-chirevo]
Ini ndinowana izvi:
midzi @ misterdixon-HP-Pavilion-dv6000-GA384UA-ABA: ~ / rpi-rtl8188eu # gadzira
gadzira ARCH = i386 CROSS_COMPILE = -C /lib/modules/3.8.0-36-generic/build M = / mudzi / rpi-rtl8188eu ma module
gadzira : pinda dhairekitori "/usr/src/linux-headers-3.8.0-36-generic"
CC [M] / root/rpi-rtl8188eu/core/rtw_cmd.o
Mune faira inosanganisirwa kubva / root/rpi-rtl8188eu/core/rtw_cmd.c:23:0:
/root/rpi-rtl8188eu/include/osdep_service.h: Mukushanda 'thread_enter':
/root/rpi-rtl8188eu/include/osdep_service.h:1397: 2: kukanganisa: kuzivisa zvachose basa 'daemonize' [-Werror = implicit-function-declaration]
gadzira : *** [/root/rpi-rtl8188eu/core/rtw_cmd.o] Kukanganisa 1
gadzira : *** [_module_ / mudzi / rpi-rtl8188eu] Mhosva 2
gadzira : buda dhairekitori "/usr/src/linux-headers-3.8.0-36-generic"
Ndokumbirawo mubatsire ndine mavhiki maviri ndisingakwanise kuiisa.
Pindura kuna Misterd
Mhoro Misterd tarisa iyi link http://linuxforums.org.uk/index.php?topic=11065.0 Ini ndaive nekanganiso yakafanana neyako, ini ndakatevera nhanho uye dzakashanda zvakakwana paUbuntu 13.04 kernel 3.8.0-19. Zvido.
Mhoroi, zvinosuwisa kuti nzira iyoyo haishande kwandiri nekuti kukuvadzwa kadhi kadhi rewifi notibhuku handikwanise kurodha chero chinhu nekuti ini handina internet.
Ini ndakadzora mutyairi kubva git kuenda mundangariro, asi hazvindiise nekuti ini handina GIT pane yangu Ubuntu system saka hazvigoneke kwandiri.
Ndine iyo yakashata wifi adapter mune vhezheni 2 asi ini handigone kuitisa kuti ishande neimwe nzira.
Pano ini ndichaenda kunorwa zvakanyanya, asi kune vasina ruzivo kana neruzivo diki muLinux ndeye odyssey sezvo ivo vasina internet uye vasingashandise masoftware software kuisa chimwe chinhu, nekuti pangave pane kutsamira kusipo kana iwe une kuisa mirairo yakati wandei (unganidza, gadza uye nezvimwe).
Dai chete avo vasingade kutonga kwakanyanya pamusoro peOS vaigona kupihwa sarudzo, ndinofunga Linux ingadai yakabvisa zvakawanda uye vasina ruzivo vangangowedzera "nyanzvi" uye kutanga kuongorora iyo yese Linux.
Pasina kutaura kuti zvakatora nguva yakareba kuve nehunyanzvi nhanho mitambo, chete muna2014 seCry Engine ichange iine rutsigiro rweLinux.
Ini handigoni kutenda kuti Linux-based system senge Android inozivikanwa sei pasirese paserura mafoni, mapiritsi, uye zvimwe zvishandiso.
Asi hei, ini ndoda rubatsiro kana zvichikwanisika kuisa mutyairi weiyo wifi kifaa muUbuntu.
Kune avhareji Windowslerdo, kunyura mugirazi remvura chinhu chezuva nezuva. Iwe ungadai wakachengeta pasina dambudziko iko pachena uye nguva dzose kusingabatsiri kutaura kwe "Linux ingadai yakabvisa zvimwe dai zvaive nyore" uye dai ambuya vako vaive nemavhiri, zvirokwazvo raizove bhasikoro. Kana iwe usingakwanise kutenda nezve = Android, zvimwe kwandiri): humbowo uye kuremadza kwako kuomarara kwehupombwe kunoratidzwa. Dzidza zvese zvaunogona, Linux iri yemahara chaizvo nekuda kwechikonzero ichocho: kuitira kuti vanhu vasina kuvhenekerwa kwazvo vadzidze pamadanho avo uye padanho ravo, ndiyo inoshanda system yekuti uzviite sezvaunoda, kwete zvako kuti zvese zviitwe. Uye kana usingaifarire, ichiri windowslerdo uye ikozvino, kuuya kuLinux blog kuzochema kuri kunyatso kuseka kumuoni asi zvinosuwisa zvikuru kufungisisa. Iwe ungadai wakatora dambudziko kuisa mune iyo vhezheni yeUbuntu yawakaedza kuisa mutyairi uye isu tinogona kukubatsira iwe, iyi posvo ingangoita makore maviri apfuura uye pakave nekuchinja kwakawanda munyika, kwete senge izvozvo muuropi hwako asi mukati zvakasara zvakasara hongu. Unogamuchirwa.
Ko laptop yako haina Ethernet chiteshi here? Mwari vatibatsire, ndikangoona iwe uchinyunyuta kuti haugone kuwana internet nekuti yako wifi haishande ... ini ndichaseka kubva pano kusvika mazuva matatu anotevera. Pamusoroi.
Kupusa kwevanhu hakuzivi miganhu. Ichokwadi ndechekuti hazvigoneke kuburitsa zano kana chirevo usinga bude avo vadziviriri veLinux vanotenda kuti ivo vanachiremba mukombuta sainzi avo vaizoita Linus Torvalds aite kunge mukomana ane makore mana ekuberekwa. Ichokwadi ndechekuti iwe unofanira kutanga kusiya kombiyuta yesainzi zvishoma uye kutora nzira yakakura uye yepamusoro muhukama hwevanhu kuti uone kuti pane kugumbura nekuratidza "hukuru hukuru" iwe unobatsira avo vanoshaya. Kana ini ndikapinda muforamu iyi imo nekuti vhezheni yeUbuntu yandinayo ndizvo chaizvo uye kana ndikati handina internet ndeyechimwe chinhu kwete nekuti ndiri benzi mandisingazive netambo tambo yelaptop yangu , Ndinayo sekombiyuta yepc uye handina tambo yedandemutande yakareba zvakakwana kuti isvike, kunyangwe izvo zvisingakufadze sezvo uri mukati mehungwaru hwako uye haubvume kuti kune vamwe vaunotenda kuti "vakaderera . " Zvisinei iwe nekuzvikudza kwako kunanaobs kana windoslerdoz sekudana kwaunoita hakubatsire. Ndingadai ndakasarudza munhu anga asingazive zvakanyanya kana zvirinani anga asina kujekeswa sewe asi achiedza kubatsira. Ndatenda (kune yako "unogamuchirwa").
Ichokwadi, hupenzi hwevanhu hwakaipa kwazvo zvekuti haugone kuisa mutyairi paUbuntu! Mwari vatibatsire. Unogamuchirwa, huya paunoda kunakidzwa.
Ndinoedza kukubatsira ipapo:
1. Bvisa homwe yako hombe, inorema kubva padhesiki rako.
2. Uuye nayo padhuze ne router kana modem inokupa iyo Internet (ndiro bhokisi rine mwenje diki unovhura uye kudzima)
3. Unganidza tambo yeRJ45 Ethernet kuchiteshi pane yako laptop, uye zvakare kune yemahara ethernet chiteshi pane yako router kana modem. Tora nguva yako.
4. Tarisa kuti une internet mubhawa rebasa reUbuntu, yambiro ichaonekwa ichikuudza kuti netiweki yakabatana. Kana zvikaonekwa, urikuita zvakanaka kwazvo.
5. Isa GIT nekoni seinotsanangurwa mudanho rekutanga remirairo.
7. Edza kuteedzera rairo zvakanyatsonaka, tora nguva yako, zvinogona kusvika mazuva mana asi uchanyatso kubudirira.
Ndine urombo nekuchinja marongero edzidziso, ndakasvetuka wechi 6. Kuseka kwacho kunogona kupfuura kupereta kwangu, asi iwe unogona kuteedzera rairo uine chivimbo chakazara, zvinonyatso kukubatsira.
Yakashanda zvakakwana, asi kodhi yacho inopa kukanganisa painonyora. Iyi imwe vhezheni inounganidza yakakwana, zvakadaro
Ndinokutendai nekuvandudza repository.
Gustavo Arlex akadaro
Yakanakisa mupiro iyo rtl8188eu mutyairi anoshanda nemazvo muUbuntu 12.04 pa64bits.
Pindura Gustavo Arlex
Abraham Zenteno akadaro
Mhoro kunaka kweruzivo rwako kwakandibatsira zvakanyanya ini ndiri kuyedza kuisa chishandiso mune yepakutanga os luna iyo yakavakirwa pa ubuntu 12.04, iyo kernel vhezheni ndeye 3.2.0-61-generic-pae, dambudziko randinaro nderekuti Ratova inoona chishandiso asi hazvigoneke kuti ini ndigone kumisikidza kuti itarise masetwork asina waya uye ibatanidze, ndinovimba munogona kundibatsira ndatenda:
Gadzira iwconfig nemhedzisiro inotevera
wlan0 isina kubatana Nickname: »»
Mamiriro: Auto Frequency = 2.412 GHz Yekupinda Nongedzo: Haisi-Yakabatana
Edzazve: kubva paRTS thr: kubvisa Fragment thr: kure
Encryption kiyi: kudzima
Power Management: kudzima
Batanidza Hunhu = 0/100 Signal level = 0 dBm Noise level = 0 dBm
Rx isina kukodzera nwid: 0 Rx isina kukodzera crypt: 0 Rx isina kukodzera frag: 0
Tx yakanyanyisa kudzokorora: 0 Haisiyo misc: 0 Yakarasika bhakoni: 0
Pindura kuna Abraham Zenteno
Mhoroi, ndanga ndichida kuisa iyo adapta pane rasipiberi pi ine arkOS (inova yakabva archlinux) asi ini handigone (kana handizive) kuisa dkms, ndakaedza pacman asi handikwanise tsvaga iyo pasuru, ini handizive kana zvichizodikanwa kuti uite izvo zvakafanana neyourt sezvakaratidzwa pano http://archlinux.fr/yaourt-en . Kana mumwe munhu achigona kundibatsira ndinotenda zvikuru
Iwe unofanirwa kuisa Yaourt kutanga kushandisa iyo dkms, iyo package iri muAUR repos uye neYaourt ivo vanoiswa nyore.
Yakanaka dzidziso! Ini ndichangoisa ino wifi adapter pamushini wekare wakadzoserwa kuhupenyu neLinux. Kutenda kuzhinji!
Mhoro zvakare! Ini ndanga ndakatarisa kune iyo GitHub peji reiyo repository yemutyairi uye ndikasangana nemeseji iyi:
«Iyi repo yadzikiswa, ndapota goto https://github.com/lwfinger/rtl8188eu zvekuvandudzwa mune ramangwana. »
Naizvozvo ndinofungidzira kuti shanduko inofanirwa kuitwa padanho rechipiri (rekuitwa kweUbuntu) uye woenderera mberi nezvimwe, handiti?
Ini ndoda kujekesa kuti mutyairi wekare achiri kushanda asi zvinoratidzika kwandiri kuti zvingave zvakanaka kugadzirisa repository kuti uzive zvinogona kuitika.
Ndinokutendai zvikuru nemupiro wenyu, ndinotarisira kuti avo vanofarira verengai zvese zvataurwa kusvika kune enyu uye vatarise kugadzirisa kweiyo GIT repository, nekuti chinyorwa chatova negore uye handichakwanise kuchichinjazve.
Aya maadapter (TL-WN723N uye TL-WN725N V2 mini) atove akatsigirwa mumazino 3.12, 3.13 (painoshanda zvakanyanya) uye 3.14, saka kana vachishuvira vanongofanira kugadzirisa kernel uye ivo havafanirwe kuisa mutyairi, uye chimwezve chinhu, izvi zvishandiso zvinoshandisa zviwanikwa zvakawanda kubva pc kana Laptop, ndinofunga imhaka ye chipset, kunyangwe hazvo vanga vachivandudza kubvira kernel 3.13+.
Pindura kuna hj
Mhoroi, ini ndinowedzera chimwe chinhu: USB 3.0 chiteshi chiri kuchema, hapana zano nei. Uye haina kugadziriswa nekushandisa nyowani vhezheni yekernel, nekuti ini ndakaiyedza muna13.04 uye muna14.04.
Nzvimbo isina kunaka yechitoro iyo yakaratidza iyi adapta….
ndine hurombo jorge June 26, 2014 4:37 PM, iyo TP-link TL-wn725n nano usb wifi adapter yakushandira iwe mu ubuntu 14.04 lts mune usb port. 2? Ndine dambudziko kwenguva yakareba neine encore n 150 enuwi 1 nx 142, uye ndinoda kutenga iyo TP inonzi pamusoro, kana ichikurudzira usb wifi ye ubuntu. PS: Ndine ubuntu inotevera kukunda 7.
Jose Luis Reyes C. akadaro
Yakanaka dzidziso uye yakanyatsotsanangurwa nhanho nhanho, ini ndaive ndisina dambudziko kumisikidza yangu wifi chishandiso muUbuntu 12.04, ikozvino ini ndichakwanisa kuita iwo akateedzana mitezo, ndinokutendai zvikuru, yakanakisa chinyorwa .. !!! uye inobatsira zvikuru.
Pindura kuna Jose Luis Reyes C
gonzalo serrano akadaro
Ndinokutendai zvikuru, mirairo yenyu yakanaka.
Ini ndanga ndisina network muUbuntu asi kubva windows ndakaenda kune yako git link: //github.com/liwei/rpi-rtl8188eu.git uye yakadzora zvese mu zip (vanokupa sarudzo). Ipapo ini ndakaiburitsa mufaira iyo iyo inoteedzera kune linux kurodha pasi. Ipapo ini ndakatanga kubva nhanho 3.
Ndatenda zvakare muchina
Pindura kuna gonzalo serrano
Mhoroi vanhu, ndine dambudziko, ini ndiri mutsva kwazvo kune izvi uye ndinoda rubatsiro diki ha
Ndine xiaopan pane pendrive, ndinotanga pandinobatidza PC, zvese zvinofamba zvakanaka asi, ndinopinda Beini uye kadhi yewifi haina kundiziva (ndangotenga TL-WN725N v2). Ini handizive zvekuita, uye handinzwisise zvakawanda nekuti sekutaura kwandakaita ndisati ndanyatso kuve mutsva, ruzivo rwese rwunondibatsira. Ndinovimba mhinduro, maita basa kwazvo shamwari 😉
Ini ndakabudirira kuisa TP-Link IC: 8853A-WN725N isina waya network interface kifaa mutyairi paUbuntu 12.04 kernel 3.2.0 uchitevera mirairo yako, ndatenda zvikuru!
Pindura kuna Samuel
Ndatenda zvikuru, zvaindibatsira kwazvo.
Marco Olvera akadaro
Mhoro, wakadii? Ndine urombo, ndiri kufarira kutenga imwe yeaya maapapatata matsva sezvo laptop yangu isinga shande zvakanaka newifi, kadhi rakakuvadzwa, asi ndinoda kuziva kana richishanda muWindows 8.1
Pindura Marco Olvera
Mhoroi ndine dambudziko uye ndinoda kana muchikwanisa kundibatsira, ini ndichangobva kuisa Fedora 21 pane yangu dell inspairon laptop, yakakamurwa nemahwindo 8; asi izvi zvine dambudziko newifi haibatanidzi kunetiweki saka ine usb TP LINK TL-WN723N inochinjika, ikozvino dambudziko nderekuti muFedora handigone nechero nzira yekubatanidza neinternet, zvikasadaro sezvo kuchirikadzi 8 kana inoziva iyo USB uye ini ndinokwanisa kufamba pasina dambudziko, ini ndiri newbie muLinux mune zvese uye ndinoda kana iwe uchikwanisa kunditsigira zvikuru nekutenda nekwaziso.
Iwe unogona here kutumira maitiro ekuisa iri kadhi mu Open Suse 13.2.
Pindura kuna npinelo
Mhoroi, ndine nyaya inotevera
Linux 3.16.0-40-generic # 54 ~ 14.04.1-Ubuntu SMP Wed Jun 10 17:30:45 UTC 2015 x86_64 x86_64 x86_64 GNU / Linux
Tp-Batanidza Tl-wn727n kanyanga:
Bhazi 003 Chishandiso 008: ID 148f: 7601 Ralink Technology, Corp.
Ndakaedza kumisa kanyanga iine Windows isina waya mutyairi, ndinofunga ndakaisa mutyairi chaiwo (rt2870) nekuti ndiyo yakauya padiski rekuisa uye inozivawo kuti kanyanga kakabatana (mumawindows waya isina waya ini ndinowana " Hardware Parizvino: EHE "kana kanyanga kakabatana. Kunyangwe izvi, ini handikwanise kushandisa iyo Wi-Fi nekuti hapana materevhizheni asina waya mune chero mamaneja emambure andakaedza.
Leandro Leiva akadaro
Mhoroi, ndine windows 7. Isa madhiraivha ese sezvo nhanho dzese uye hapana network inondiziva .. Ndakaiyedza ine laptop munzvimbo imwechete uye inondiziva. Ndingagadzirisa sei izvozvo?
Pindura kuna leandro leiva
Mhoroi, ndanga ndichida kukuyambirai kuti pasuru iyi yava kunzi 8188eu-dkms.
Mhoro. Pane chero munhu ari paforum? Ini ndaida kuona kana iyo 723 kana iyo 725 inoshanda mubhokisi rakazara muchirongwa che linux kuongorora network yangu. Kana iwe uchiziva iyo usb adapter
HD Magazini # 8 inowanikwa
[Yakagadziriswa] Ubuntu hwakarembera pakutangisa: nhema / yepepuru chidzitiro cherufu